फट्यांग्रा नियन्त्रण गर्न चीनले एक लाख हाँस पाकिस्तान पठाउँदै ! « Naya Page
फट्यांग्रा नियन्त्रण गर्न चीनले एक लाख हाँस पाकिस्तान पठाउँदै !
प्रकाशित मिति : 1 March, 2020 2:22 pm
इस्लामावाद, १८ फागुन । नेपालमा खेतीपातीमा फट्गांग्राले दुःख दिए किसानहरुले कीटनाषक औषधि छर्छन् । तर, छिमेकी देश चीनले भने फट्यांग्रा नियन्त्रणको अनौठो उपाय अगाडि सारेको छ । फट्यांग्रा नियन्त्रण गर्न चीनले एक लाख हाँस पाकिस्तान पठाउने योजना ल्याएको छ ।
‘सलह’ फट्यांग्राले खाद्यबालीहरु नष्ट गर्न थालेपछि पाकिस्तानले यसै हप्ताको शुरुवातमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको थियो । फट्यांग्राले पाकिस्तानको खाद्यबालीमा दुई दशकयता नै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएर खाद्य संकटको अवस्था निम्त्याएपछि चीनले यस्तो योजना बनाएको हो ।
यस लगत्तै चीनले उक्त फट्यांग्राको चुनौतीसँग जुध्न आफ्नो विशेषज्ञसहितको टोली पाकिस्तानमा खटाउने बताएको छ । सलह फट्यांग्राले खाद्यबालीहरु पूर्ण रुपमा नष्ट गर्नसक्छ। जसका कारण खानाको अभावले भोकमरी निम्तन सक्छ ।
गत महिना मात्र सलह फट्यांग्राले दक्षिण सुडानमा भोकमरी निम्त्याएको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । चीनको विशेषज्ञ टोलीले एक हाँसले दिनमा २ सय वटा फट्यांग्रा खाने जनाइएको छ । हाँस किटनासक औषधिभन्दा राम्रो उपाय भएको चिनियाँ विज्ञले बताएका छन् । एजेन्सी
बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई ‘आईसीयू’ मा
प्रेमीसँग २७ मिनेट फोनपछि रङ्गेहात भेटेका देवरको हत्या, अवैध सम्बन्धले पुर्‍यायो खोरमा
काठमाडौं, २५ चैत । यो कथा हो सामाखुसीस्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रममा आश्रय लिएकी सरस्वती भुजेलको । उनको
काठमाडौं, २५ चैत । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनलाई लण्डनको अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा
बर्दिबास, २५ चैत । महोत्तरीको पर्साकी सगिरा खातुनलाई अबैध सम्बन्धले प्रहरी खोरमा पुर्‍याएको छ ।